September 4, 2020 - Purakhabar
निषेधाज्ञाको समयमा होटलमा गएर जुवा ! व्यवसायी र नेता पक्राउ
September 4, 2020 Sunil Khattri
१९ भदौ, स्याङ्जा । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रशासनले सर्वसाधारणलाई भेला, जम्मा हुन र भिडभाड गर्न निषेध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशका कारण सामान्य नागरिक घरमै छन् । तर, स्याङ्याजाका केही व्यवसायी, नेता र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी भने निषेधाज्ञाको समयमा पनि होटलमा भेला भएर जुवा खेलिरहेको अवस्थामा बिहीबार पक्राउ परेका छन् । शुक्रबारदेखि भने जिल्लामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार बिहीबार वालिङ नगरपालिका–८, कटौजेमा विवेक तिवारीले चलाएको प्रसाद होटलमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ८ जना पक्राउ परेका…
हामीलाई थाहा भएको कुरा नै हो । हामी गहिरो निद्रामा भएको बेला केहि कुरा पनि थाहा हुदैन । यस्तो निद्राको समयमा एकदम आनन्दको अनुभुत हुने गर्दछ, त्यसैले पनि हामी आफैले आफु घुर्ने वा नघुर्ने थाहा पाउँन सक्दैनौँ । जब तपाईको नजिक सुतेको साथी घुर्न थाल्छ तपाईलाई बडो समस्या पर्छ। यस्तो अवस्थामा संगै सुत्ने तपाईको निद्रा नराम्रोसँग बिग्रिन्छ । घुर्नुलाई अंग्रेजीमा ‘Snoring’ भनिन्छ भने चिकित्साको भाषामा ‘Sleep Apnea’ पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ । यो यस्तो बिमारी हो जसले घुर्ने व्यक्तिलाई लज्जित पर्छ भने सँगै सुत्ने व्यक्तिको निन्द्रा खल्बल्याईदिन्छ । यद्यपि, यो…
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कोरोना संक्रमित गर्भवतीको शल्यक्रिया
बुटवल- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कपिलबस्तुकी कोरोना संक्रमित गर्भवतीको शल्यक्रिया भएको छ । कपिलबस्तु नगरपालिका-२ कि ३० वर्षीया महिलालाई सुत्केरी गराउन शल्यक्रियाबाट गरिएको हो । अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले संक्रमित गर्भवतीलाई शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराएको बताए । डा. गौतमकै नेतृत्वमा शल्यक्रिया भएको थियो । आमाको र शिशु दुवैको अवस्था सामान्य रहेको पनि डा. गौतमले बताए । उनका अनुसार आमा र शिशुको पिसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरू डिस्र्चाज हुनेछन् । शल्यक्रियामा चिकित्सका साथ अस्पतालका नर्सिड इन्र्चाज ज्योति पौडेलसहित शृष्टि कोइराला, माधुरी ज्ञवाली संलग्न थिए । यसअघि अर्घाखाँचीको मालारानीकी २२ वर्षीया…
‘म त मान्छे काटेर आएको, मलाई कारबाही गर्नुस्’
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका– १३ खल्चेतबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङवेशीबीचको दुरी अन्दाजी १० किलोमिटर छ । बीचमा जंगल पनि छ । कच्ची बाटो भएको कारण पैदल हिँडेर डेढ घण्टा लाग्छ । बिहीबार राति करिब १ बजेतिर उक्त बाटो हिँडेर एक युवक हस्याङ फस्याङ प्रहरी कार्यालय पुगे । प्रहरी कार्यालयको मुलगेटमा ड्युटीमा बसेका प्रहरी जवानले सोधे, ‘यति राति–राति कता हिँडेको ?’ तत्कालै ती युवाले टाउको लिएर आएको बताए । ड्युटीमा खटिएको प्रहरी जवान झस्किए । के टाउको ल्याएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘म त मान्छे काटेर आएको,’ ती युवाले भने । ड्युटीको…
युएई । सयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट काठमाडौंको लागि थप १० उडान हुने भएको छ। युएईस्थित नेपाली दूतावासले आज एक सूचना जारी गर्दै थप १० उडान हुने तालिका सार्वजनिक गरेको हो। यस अघि गत बुधवार दूतावासले ५ देखि ३० सेप्टेम्बरसम्म १८ वटा नियमित उडान हुने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर ५ देखि ३० तारिखसम्म नेपाली नागरिक र तोकिएका विदेशी पर्यटकलाई मात्रै नेपाल लैजाने गरि नियमित रुपमा युएई–काठमाडौं उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि दूतावासले आज शुक्रवार सूचना जारी गर्दै सेप्टेम्बरसम्मको उडान तालिका सार्वजनिक गरेको हो । दूतावासले नेपाल जानका लागि…
पुल्चोकको झडप नियन्त्रणमा खटिएका १८ प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण
१९ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत ५६ प्रहरीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा बिहीबार ललितपुरको पुल्चोकमा भएको झडप नियन्त्रणमा खटिएका १८ प्रहरी समेत छन् । रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ स्वस्फूर्त तान्न खोज्ने युवालाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको थियो । त्यहाँ भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका ललितपुर प्रहरी परिसर र सातदोबाटोका १८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि आइसोलेसन बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर ती प्रहरीलाई स्वाब दिएपछि पनि भिड नियन्त्रणमा खटाएको पाइएको छ ।…
जबरजस्ती करणीको आरोपमा २ जना पक्राउ,३ जना अझै फरार
सिराहा – सिराहामा एक महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार २१ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा गोलबजार नगरपालिका १० बस्ने २१ वर्षीय दिपेन्द्र मुखियासहित २ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले दिएको जानकारी अनुसार, मुखियाँ लगायत ५ जनाले भदौ १३ गते ती महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सूचना पाएलगत्तै ईलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाबाट खटिएको प्रहरी टोलीलो दुई जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्नमध्ये ५ मध्य ३ जना अझै फरार छन् ।
२४ घण्टामा १४ को मृत्यु, नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ७१ पुग्यो
काठमाडौं, १९ भदौ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा चार जना महिला र दश जना पुरुष रहेका छन् । जसमा काठमाडौंका ७८, ६७ र २२ वर्षीया तीन जना महिला सहित चितवनकी ३५ वर्षीया महिला रहेकी छन् । त्यसैगरी सप्तरीका ५५ बर्षका २ जना पुरुष सहित धनुषाका ६५ वर्षीय, कास्कीका ३१ वर्षीय, नवलपरासीका ३७ वर्षीय, प्यूठानका ५८ वर्षीय, पाल्पाका ६३ वर्षीय र सुर्खेतका ४२ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । योसंगै देशभर कुल मृतकको संख्या २ सय…
डा.युवराज खतिवडाले दिए पदबाट राजीनामा
काठमाडौं । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । खतिवडाले शुक्रबार अपरान्ह बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई रजीनामा बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिए । भोलिबाट खतिवडाको पदावधि सकिदै थियो । खतिवडा गत फागुनमा राष्ट्रियसभाको दुई वर्ष कार्यकाल सकिएपछि सांसद पद बिहीन भएका थिए । संविधानको धारा ४८ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्री बनेका खतिवडा मन्त्री भएको शनिवार ६ महिना पुग्दैछ । संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री पदमा रहन नपाउने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो राजीनामा बुझाउनुअघि मन्त्री खतिवडाले…
काठमाडौं- पछिल्लो २४ घण्टामा थप १३५४ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म २५ हजार ५६१ पुगेको छ । उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि विहीबारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २४ हजार २०७ थियो । मन्त्रालयका अनुसार विहबारसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २५७ पुगेको थियो ।